Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly. Vao nanandrana naka aho teo fa nahazo. Mahefa be asan’ny Tompo. Vao avy notélécharger ko zao ilay izy dia mety. Toa tsy mety mandeh mantsy le izy. Dia misy karazany maro any:
Averiko eto indray ilay izy:. Mahereza amin’ny asan’ny Tompo. Raha mba misy olona afaka manampy ahy dia isaorako mialoha. Ho tahian’Andriamanitra isika protwstanta indrindra izay nahatotosa izay sanga n’asa tsara izao. Mandehana ao amin’ny lien Mana isan’andro fa misy zavatra mahasoa isan’andro ao.
Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao. Misaotra betsaka fa azoko ihany ilay application ny farany.
Manahona Tompokoba maniry izay ba ho afaka ampiasaina amin’ny macbook ihany koa ny baiboly malagasy Répondre. Ity Misy lien azo hi-télécharger – na azy raha mety aminao. Créer mon blog Créer mon compte. Ho tahian’Andriamanitra isika rehetra indrindra izay nahatotosa izay sanga n’asa tsara izao. Maintenant, vous pouvez consulter la bible en 3 langues fihurana, en malagasy, en français ou en anglais.
Miarahaba antsika rehetra, ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly antsika rehetra. Manao ahoana toa tsy mande ilay lien ahafahana mahazo ilay logiciel?
Vous pouvez aussi lire la Bible en 3 langues différentes: Na koa afaka alefanao mail aty amiko mivantana. Mandehana ao amin’ny lien Mana isan’andro fa misy zavatra mahasoa isan’andro ao. Ho tahian’ny Tompo ianao!
Izaho dia efa niezaka nanao téléchargement tamin’ny téléphone-ko blackberry dia nahazo tokoa protetanta tsy mety misokatra ilay smartbaiboly fa izao no soratra miseho eo hoe: Oui Non Parfois Afficher les résultats.
Bonjour, mila namana finirana efa nandray ny tompoafaka mahita ve rabefa: Dia misaotra mialoha sahady ho an’izay mamaly dia samy ho tahian’Andriamanitra isika rehetra e! Mirary soa dia mazotoa. Mankahery anao hatranihatrany fa asa masina izao ataonao izao fa mizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ny olona rehera!
Vao nanandrana naka aho teo fa nahazo. Tsara be sy manampy o Misaotra Répondre. Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly.
Mankasitraka indrindra satria tsara tokoa ilay izy. Bjr, za zany miasa amin’ny orin’asa iray e! Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata Répondre.
Misaotra an’i Mr Rivo fiarahamiasa. Betsaka ny olona no manoratra sy miantso, mangataka ny mba hamoahana ny version mobile ny Ny Baiboliko.
Windows 10 zao no nanandramako azy farany fa tsy misy olana mihitsy. Raha mba mety tompoko dia mba alefa ty adresse ty doinfographist gmail. Isaorana ianareo rehetra izay nifarimbola; Mankasitra Hono rihirana aho, izy io ve compatible am window 10? Mitelecharger ity baiboliko ity aho fa tsy mety kanefa teo aloha aho toa nety ihany fa inona no tokony hatao azafady indrindra. Par un simple clic, vous pouvez poster directement sur votre mur protestxnta vos versets préférés.
Mahefa be asan’ny Tompo. Samy hotahian’i Jesosy daholo indrindra fa ianao izay nanao ity logiciel ity. FozaRemover – patch pour virus qui supprime votre bureau Ny Baiboliko – autre version.